राजधानीको रमाइलो र साहूको सपना | चितवन पोष्ट दैनिक
राजधानीको रमाइलो र साहूको सपना
२०७० मंसिर ३०, आईतवार ०४:०९ गते
‘बिजनेसम्यान’ हुने रहरले राजधानी हान्निएपछि केही त गर्न परिहाल्यो । राजधानीमा केही न केही इलम नगरी ज्यान पाल्न सकिन्न । सामान्य जीवनयापनकै लागि भए पनि केही गर्ने विचार मनमा पलायो । अब के गर्ने ? सल्लाहको खोजीमा लागियो । कसैले होटल खोल्न भने, कसैले लज राख्न सुझाए त कसैले साइबर सञ्चालन गर्न सल्लाह दिए । इष्टमित्रले यो लोडसेडिङको देशमा साइबरभन्दा फाइबरकै व्यापार राम्रो हुन्छ भनेर अर्ती दिए । साथीभाइले कन्सल्ट्यान्सी चलाए ६ महिनाभित्रै टक्सन चढ्न सकिने सपना देखाए । राजधानीमा सवारीको चाप, जनघनत्व, अव्यवस्थित बसोबास र फोहोर देखेर उकुसमुकुस भए पनि आफ्नो ‘क्यारिअर’ बनाउने राम्रो ठाउँ भनेर राजधानीले लोभ्याएको थियो ।
रोडपतिदेखि अर्बपतिसम्म अटाउने, माग्नेदेखि मन्त्रीसम्म, सभापतिदेखि राष्ट्रपतिसम्म, ड्राइभरदेखि डाक्टरसम्मको रोजाइ हुने राजधानी सहरमा पक्कै पनि केही विशेषता भएरै पचहत्तर जिल्लाका मानिस अटाएका हुन् । बाध्यता, विवशता जेजस्तो भए पनि सबै रमाएकै देखिन्छन््, रातापिरा र रसिला देखिएकै छन् । समुद्रमा एक थोपा पानी थपिएर समुद्रलाई केही असर नपरेजस्तै राजधानी सहरमा मेरो उपस्थितिले राजधानीलाई घाटा नहुनु पर्ने हो, भीड नबढ्नु पर्ने हो, अभाव नहुनु पर्ने हो । तर, सबै अटेको ठाउँमा म अटाउन गाह्रो भयो । केही महिना शरणार्थी जीवन पालेपछि एउटा हवेलीमा कोठा मिल्यो । कोठाभाडा सुन्दा तर्सेर बेहोस होइएला जस्तो भाथ्यो । शरणार्थी जीवनभन्दा त आफ्नो बासको अस्थायी समाधान गर्नु नै उचित ठानेर कोठा महँगो भए पनि गाँसबासकोे व्यवस्था मिलाइयो ।
कीर्तिपुरमा स्नातकोत्तर पढ्ने एक विद्वान् मित्रले राजधानीमा केही गर्ने अर्ती सुझाए । ज्यान परेको भए बाउन्सर नै भइन्थ्यो होला, ग्याङ धेरै भइदिएको भए ग्याङस्टारमै सामेल हुन सकिन्थ्यो । गाईप्राणी भएकै कारण जोखिमपूर्ण काम गर्न सकिएन । सुकेनासले ग्रस्त भए पनि गोलतिरका केही युवाहरु ग्याङस्टार नै हुन् कि क्या हो जस्तो भान हुन्थ्योे । अलिक समयपछि थाहा भयो, सबै हिम्मतकै कुरा रहेछ ।
एक बिहान एउटा क्याफेमा बिजनेसम्यानहरुको विशेष गफ भइरहेको थियो । गफ यस्तो थियो– ‘पहिले थोत्रो ट्याक्सी त थियो नि, पछि कमाइ गर्दै गएपछि माइक्रो नै पाँचवटा भयो । अब टुरिस्ट बस किन्ने विचार छ । चितवन–पोखरा–काठमाडौँ चलाए मालामाल भइन्छ ।’ उनीहरुको कुराकानीबाट थाहा भयो कि ती यातायात व्यवसायी रहेछन् । त्यसमा पनि सफल र कुशल व्यवसायी । एक पटकको भेटघाटबाट उनीहरुसँग आत्मीय बन्ने कुरा पनि आएन । के मेसोले कुराकानी गर्ने ? यस्ता व्यवसायीसँग ‘बिजनेस टिप्स’ लिन मलाई हतार भइरहेको थियो । साँझ–बिहान सोही जङ्सनमा पन्ध्र दिनजति धाएपछि ती सफल व्यवसायीसँग घनिष्ट भइएको थियो । त्यसपछि त के चाहियो र ? राजधानी आफ्नै जस्तो भयो ।
चियाको चुस्कीसँगै जोडिएको सम्बन्धले गति लिइरहेको थियो । भान्छादेखि बिस्तारासम्म सेयर भएपछि सम्बन्धले नयाँ मोड लिन सजिलो हुने नै भयो । उनले पनि बिजनेसम्यान बनाउन सहयोग गर्ने बचन दिए । त्यसका लागि एउटा गाडी किन्नु जो थियो । उनैको सहयोगले एउटा गाडी किन्ने सोच पलायो । तर, गाडीको साहू बन्न सजिलो थिएन । आफूसँग भएको ब्यालेन्सले गाडीको साहू बन्न असम्भव पनि थियो । हलगोरूजस्तो दाहिने–देव्रे मिलेर हिँडेपछि उनले त्यसमा भरपूर सहयोग गरे । अब त पक्का गाडी मालिक बन्न लागिएको थियो । त्यतिबेला भुँइमा खुट्टा हुने कुरा भएन । खुसीले सीमा नाघेको थियो ।
पूजाआजासहित ध्वजापताकाले सिंगारेर गाडीलाई झिल्के बनाइयो । बेलुकी क्याफे बुक गरिएको थियो । यातायात व्यवसायी र मजदुरले भरिभराउ हुँदा माहोल नै अर्कै भइरहेको थियो । अब क्याफेका मालिकले नवप्रवेशी गाडी साहूलाई विशेष आतिथ्यका साथ स्वागत गर्न थालेका थिए । अब पुरानो पहिचान पूर्ण रुपमा फेरिएको थियो । खानपिन, लवाइखवाइ र सरसंगतले गर्दा आफ्नो ‘स्टाटस्’ अलिक बढेको हो कि जस्तो आफैँलाई लागिरहेको थियो । गाडी मालिकहरुसँग दोस्ती जमेपछि एक्लोपनको महसुस पनि हुन पाएन । गाडीबाट दैनिक राम्रो आम्दानी भएको थियो । साहू मित्रहरुलाई स्वागत गर्न कोठाबाट फ्ल्याटमा परिणत गरिएको थियो । पहिले कोठा दिन कन्जुस्याइँ गर्ने घरभेटीले गाडीको साहू बनेको खबरसँगै यो घर तपाईंकै त हो नि भनेर आदर्श फलाक्न थालेका थिए । कहिल्यै प्रवेश नगराउने भान्सामा स्वागतका साथ ज्वाइँ सम्मान पाइएको थियो । घरभेटीसँग नयाँ सम्बन्ध विकसित भएपछि त्यही सम्बन्धले गर्दा रात्रिकालीन रमाइलोमा खुबै जम्न पाइएको थियो ।
राजधानीका क्याविन, पप, लोकदोहोरी, डान्स रेस्टुराँ, डिस्कोथेग र क्यासिनोहरुमा सहज प्रवेश गर्न सकिने व्यक्तित्व विकसित गरिएको थियो । कतिपय ठाउँहरुमा त निःशुल्क प्रवेश पाइएको थियो । गाडीले कमाइ गर्दै थियो । राजधानीमा डेराबाट स्थानान्तरण गरेर स्थायी बसोबासका लागि सपना देख्न थालिसकिएको थियो । टोलका आवारादेखि ज्यानमारासम्म दोस्ती थिए । पकेटमारदेखि उल्लुको सर्दारसम्मले सलाम गर्ने माहोल बनाइएको थियो । राजधानीमा शरणार्थी जीवन बिताएका दिनहरु इतिहास बन्न थालेका थिए । हजामदेखि हरामसम्म, गायकदेखि नायकसम्म, मोडलदेखि नायिकासम्म आफ्नो मान्छे बनाइएको थियो ।
समय सधैँ एकैनासले चल्दो रहेनछ । रहँदा, खाँदा र मोजमस्तीमा साथ दिनेहरु अलिक टाढिएका थिए । त्यसको कारण थियो– व्यापारमा मन्दी आउनु, गाडीले सोचेजस्तो कमाइ नगर्नु । कमाइ नै सोचेजस्तो नभएपछि लोदर लाग्न थालेको थियो । गाडीको किस्ता केही प्रतिशत बाँकी रहेका बेला गाडी बिरामी प¥यो । कमाउने साधन नै थला परेपछि तनाव हुनु स्वाभाविकै हो । उपचार गर्दागर्दै ढाड सेकिएको थियो । घरबहाल, रेस्टुरेन्टको बिल, कर्मचारी खर्च, गाडीको उपचार, इन्धनको बक्यौताजस्ता खर्चको बिल हेर्दा टाउको रिगाउँथ्यो । जति समस्या पर्दा पनि चित्त बुझाउनु पर्ने बाध्यता आइलागेको थियो ।
ऋण–धन गरेर पनि आफ्नो साख जोगाउनु पर्ने अवस्थाले राजधानीको बसाइँ महँगो बन्दै गएको थियो । जेजस्तो समस्या परे पनि साहूको पहिचान कायम राख्नुपर्ने बाध्यता थियो । ओरालो लागेको मृगलाई बाच्छाले खेदेजस्तो गाडीका स्टाफले समेत पेल्न थालेका थिए । गाडीको साहूको अवस्था यस्तो दयनीय भएको थियो कि ड्राइभर–खलासी साहू र साहूको हालत खलासीमा रुपान्तरण भएको थियो । स्टाफलाई रिझाउन नसक्दा गाडीको कमाइ पनि घट्न थालेको थियो । यतिसम्म कि इन्धन चोरिँदा पनि उनीहरु मौन हुन्थे । खलासीले संकलित भाडा उठाएर टाप ठोकेको घटना त सिरियलजस्तै दोहोरिइरहेको थियो । एक दिन खलासी ब्रोले गाडीको टायर एक्सचेन्ज गरेर कमिसन खाएछन् । कतिसम्म भने सोझो गाडी मालिक प¥यो भने गाडीका पाटपुर्जासमेत बेचेर हजम गर्न पछि नपर्ने रहेछन् । गालीगलौच ग¥यो भने मजदुरमाथि दुव्र्यवहार भयो भनेर मजदुर युनियन नै लागिपरेपछि पीडित मालिकको हविगत के होला ?
राजधानीमा स्थायी बसोबास गर्ने सपनाले मूर्त रुप धारण गर्न नसकिरहेको अवस्थामा दुःखका दिन सुरू भइसकेका थिए । साढेसातको दशाले प्रवेश गरेर हो वा किन हो, गाडीले आफूलाई भन्दा आफैँले गाडी पाल्न धौधौ भइरहेको थियो । हरेक दिनजसो केही न केही गडबडी हुँदा डाँको छाडेर रूनमात्र बाँकी थियो । त्यसै क्रममा एक दिन एउटा ट्याक्सीलाई छुस्स के छोएको थियो, त्यो ट्याक्सीलाई नै नयाँ बनाइदिनु परेको थियो । राजधानीको सडक त्यही हो, त्यसमाथि पैदलयात्रुको भीडभाड उही हो । ठोक्किनै लागे पनि बटुवाले बाटो छाड्ने होइनन् । सवारीसाधनको चापले गर्दा दिनहुँ छिटपुट घटना त सामान्य भइहाल्यो । ओभरटेक, अस्वस्थ होड र अव्यवस्थित पार्किङका कारण ट्राफिकको गाली नखानु पर्ने दिन बाँकी थिएन । जरिवाना र क्षतिपूर्ति त यति बुझाइयो कि त्यो जम्मा गरेको भए एउटा गतिलो गाडी किन्न पुग्थ्यो होला ।
खलासीको लापरबाही र चुहावटको समस्या नहटेपछि आफैँ गाडीमा हिँड्न थालिएको थियो । इमान, इज्जत र पे्रस्टिज भएको मान्छेलाई कसैले नराम्ररी हप्काए पनि चित्त दुख्ने रहेछ । गाडीमा हिँडेकै दिन यात्रुले ‘भर्खर खलासी भएको हो भाइ.., मान्छे चिनिनस् कि क्या हो…, तेरो ढाड भाँचिदिनु पर्ने भएको हो…’ जस्ता फिल्मी डायलग खानु परेको थियो । व्यवसायी भएपछि जस्तो पनि सहनु पर्दोरहेछ । फुटपाथे गाली त कतिसम्म खाइयो भने हजम गर्न नसकेर हाजमोला नै खानु परेको थियो । प्रतिकार गरुँ भने पनि गाडी मालिकलाई नसुहाउने । सहेर कति बस्ने ?
एक दिन तलबकै निहुँमा ड्राइभरसँग डिस्कस परेपछि आफ्नो गाडी आफैँले चलाउने कठोर निर्णय गर्नुप¥यो । ड्राइभरलाई बर्खास्त गरेको आरोपमा एक साँझ ड्राइभरका भरौटेहरुबाट रामधुलाइ खाइएको थियो । एकताका ग्याङस्टारकै हैसियत बनाइए पनि पछि चुनाव हारेको नेताको जस्तै हविगत भएको थियो । ज्यान जोगाउन नै मुस्किल पर्न थालेपछि आफ्ना शुभेच्छुकहरुलाई गुहार्नु परेको थियो । उही विद्वान् मित्रले समस्याका बेला स्वःस्र्फूत किलिन्डरको जिम्मेवारी लिएर सहयोग गरे । मित्र पढाइमा अब्बल भए पनि राजधानीले दक्ष जनशक्तिको मह¤व बुझ्न सकेको थिएन । आफैँ मालिक, आफैँ ड्राइभर र खलासी बन्दा पनि समस्या सुल्झाउन सकिएन ।
एक दिन राजधानीबाट रिजर्भ गरेर बाहिर जाने क्रममा एउटा रिक्साले गाडीलाई ठक्कर दियो । गल्ती त रिक्साकै थियो । के गर्नु, ठूलो साधन भएपछि दोष पनि ठूलोकै पर्ने रहेछ । रोकिराखेको गाडीमा कसैले आएर ठोकिदिए पनि सजायचाहिँ ठूला साधनले लिनुपर्ने अनौठो नियम यही देशमा छ । रिक्सा मर्मत गर्नु परेको भए त नयाँ रिक्सा नै किनिदिनुहुन्थ्यो । के गर्ने, रिक्साचालकको उपचारमा जुट्दाजुट्दै बिजनेस चौपट भएको थियो । उसको सेवामा रातदिन हाजिर हुनु परेपछि व्यवसायको हालत के भयो होला, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । पुरानो समस्यासमेत जोडेर उपचार खर्चको जोहो गर्दा–गर्दा हाडछाला मात्र बाँकी रहेको थियो । रिक्साचालकको मक्किसकेको जीउ ओखती–पानीको प्रभावले भर्भराउँदो भएपछि यो पेसाबाट मुक्ति पाउने विचार पलायो । पचास प्रतिशत ‘डिप्रिसिएसन’ कटाएर गाडी बिक्री गरेपछि बल्ल निद्रा परेको थियो । राजधानीका हुँदाखाँदाका सर्कलबाट उन्मुक्ति पाइएको थियो ।
अव त साहूबाट एक्कासि घटुवा भइएको थियो । वैकल्पिक राजधानी झरेपछि पनि एउटा कार किनेर भाडामा लगाउने सुर नचलेको होइन । तर, निजी कारवालाको हविगत देखेपछि यस्तो आत्मघाती कदमतिर मन गएन । अझै पनि ‘बिजनेसम्यान’ हुने चाहनाचाहिँ मरेको छैन । दर्जनौँ सवारीसाधन खरिद गर्ने रहरचाहिँ म¥यो । रहरैरहरमा राजधानी गइएको थियो, रहर पूरा गरेर वैकल्पिक राजधानी आइएको छ । जिन्दगीको मोडमा के–के परिआउँछ, कसलाई के थाहा हुन्छ र ? भविष्यमा गाडी किनेर बिजनेसम्यान बनिन्छ कि ? अरुकै गाडीमा चढेर जिन्दगीको सफर गरिन्छ, केही भन्न सकिन्न । गाडीले चुर्लुम्म डुबाएर गाडीको नामै सुन्न मन नलाग्ने महानुभाव कोही हुनुहुन्छ कि ? कि गाडी किनेर मालामाल हुन घरखेत बेच्ने तयारीमा हुनुहुन्छ ? हतारमा गाडी किन्न चाहने वा तनावमा बेच्न चाहने जोसुकैले पनि हाम्रो संघमा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ । …किनकि, हामी निकट भविष्यमा नै गाडीपीडित संघ खोल्ने तयारीमा जुटिरहेका छौँ ।
कोरोना नियन्त्रणमा हाम्रो दायित्व
कसले सुन्छ– विपन्नको वेदनालाई !
सोचलाई बदल्नुहोस्, जिन्दगी बदलिनेछ !
बाँके । बाँकेका अस्पतालमा उपचाररत थप आठ सङ्क्रमितको गए राति मृत्यु भएको छ । भेरी अस्पतालमा पाँच र शिक्षण अस्पताल...
मन्त्रालयको सिफारिसविना अक्सिजन ग्यास बिक्री नगर्न अनुरोध
तनहुँमा १०० शय्याको आइसोलेसन कक्ष स्थापना
एनसेलले ल्यायो निषेधाज्ञामा राहत अफर
रोटर्‍याक्ट तथा इन्टर्‍याक्ट क्लबद्वारा मास्क तथा सेनिटाइजर सहयोग